China lashukumisa tile ifektri abakhiqizi | Kubolekiswa
Lashukumisa Steel Ikhoyili
Galvalume Steel Ikhoyili
Ikhoyili Yensimbi Yangaphambi Kwesikhashana / i-PPGI
Lukathayela zophahla Ishidi
Lashukumisa lukathayela Roofing Ishidi
Umbala Lukathayela Roof Ishidi
I-aluminized zinc tile
Ithayela elinombala ocwebezelisiwe
Umbala oboshwe ngombala
Icoil yensimbi yangaphambi komdwebo / i-PPGI 315
Lukathayela zensimbi ukufulela ishidi wenziwe umbala camera ishidi futhi lashukumisa steel ishidi futhi kusetshenzwe Roll Owenza Machine.
Ubude: 1.8m kuya ku-12m
Ngokuya ngezimo ezahlukahlukene, ihlukaniswe kakhulu ngamathayili amise okwe-T, amathayili ayinki, amathayela acwebezelisiwe njalonjalo.
Ngokusho kwezinto ezahlukahlukene zensimbi, ingahlukaniswa ngamashidi afulelwe ngombala, amashidi afulelwe ngothayela ashisayo kanye nophahla lwe-galvalume.
Intengo ye-FOB: US $ 600 - 900 / ithani
Min.Order Ubuningi: Amathani angama-25
Amandla Wokunikezela: Amathani ayi-20000 ngenyanga
Imbobo: I-Tianjin, Qingdao
Umbala Camera lukathayela Roofing Ishidi
● Ishidi elifulelwe ngombala lenziwe ngekhoyili yensimbi efakwe umbala futhi icutshungulwa ngomshini oyiRoll Forming Machine.
● Izinto eziyinhloko zokumbozwa ngopende wombala ngopende we-PE, onezimpawu zamanani aphansi, imibala ehlukahlukene nokumelana nokushisa okuphezulu.
● Upende weNippon no-Akzo Nobel ungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Umbala ohlanganisiwe wamashidi owenziwe ngotshani ngumkhiqizo otholwe ngokufaka ishidi lensimbi elibandayo elibandayo noma ishidi lensimbi eligxunyekwe ekwelashweni kwamakhemikhali angaphezulu (ukugoqa iroli) noma ukumbozwa okuhlanganisiwe (njengokumbozwa kwe-PVC) bese kubhakwa kuphulukiswa.
Insimbi yaso eyisisekelo ingamashidi agoqwe abandayo, amashidi wensimbi ashisayo, namashidi wensimbi e-aluzinc. Izinhlobo zokumboza zingahlukaniswa zibe i-polyester, i-silicon polyester modified, i-polyvinylidene fluoride, ne-plastisol. Isimo sombala wamashidi afakwe umbala singahlukaniswa sibe yishidi elihlanganisiwe lukathayela, ishidi elihlanganisiwe elinamakhasi, kanye nephepha lephethini likathayela.
Amashidi ambozwe ngombala okwakhiwa ngokuvamile enziwe ngamashidi wensimbi eshisayo namashidi wensimbi eshisayo. Acutshungulwa kakhulu abe amashidi lukathayela noma amashidi wesangweji ane-polyurethane futhi asetshenziselwa ukwakhiwa kwezakhiwo zezimboni nezentengiselwano ezinjengezinkundla zokufundisa ngensimbi, izindawo zokugcina izimpahla kanye namakhaza. Uphahla, udonga, umnyango.
● Ngophahla lukathayela lukathayela lwe-PPGI olunempilo yenkonzo yeminyaka engama-25 nangaphezulu, i-polyvinylidene fluoride (i-fluorocarbon PVDF) kufanele isetshenziselwe uhlobo lopende.
● Ngokuphahla kukathayela okwenziwe ngopende ngaphambili okunempilo yesevisi yeminyaka engu-15 noma ngaphezulu, uhlobo lukapende kufanele lusebenzise i-silicon modified polyester noma i-polyester emelana nesimo sezulu ephezulu.
● Ngophahla lukathayela lukathayela noma uphahla lwesikhashana olunempilo yenkonzo yeminyaka eyi-10 noma ngaphezulu, i-polyester isetshenziselwa uhlobo lukapende.
Langaphambilini I-aluminized zinc tile
Olandelayo: Tile lashukumisa
Q: Ingabe ukuhweba inkampani noma nomkhiqizi?
A: Singabantu ifektri lashukumisa steel ikhoyili, Aluzinc steel ikhoyili, PPGI futhi ukufulela amashidi.
Q: Kuthiwani ngekhwalithi yakho?
A: Izinga lethu lihle futhi lizinzile. Isitifiketi sekhwalithi sizokhishwa ngokuthunyelwa ngakunye.
Q: Uphi imakethe yakho eyinhloko?
A: Imakethe yethu eyinhloko iseMpumalanga Ephakathi, e-Afrika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eNdiya, eJapane, njll.
Q: Iyini imigomo yakho yokukhokha?
A: 30% T / T kusengaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa noma i-100% L / C lapho ubona.
Ishidi Lophahla Lophahla luka-Gi
Ishidi elifulelwe ngophahla lwe-Wave Wave
I-Hebei Lueding Imp. Ne-Exp Trading Co., Ltd.